Soo-saaraha Fudud ee Filimka (BM) Yanrich
Guri > Wax soo wadaban > Qalabka jikada > Cudurka makiinada kariska (bm)
Caato ahkarinta filimka Waxaa loogu talagalay in lagu kariyo waxyaabaha wax karinta ee ay ku jiraan borotiin ama walxo xasaasi ah. Waqtiga degenaanshuhu ee sheyga ku jira makiinada makiinada khafiifka ah waa mid aad u gaaban. Nidaamka waxaa loogu talagalay cadaadis caadi ah, cadaadis caadi ah, faaruq ah ama karinta post-karinta. Adeegsiga makiinada wax karinta khafiifka ah wuxuu bixin karaa natiijooyin si dhakhso ah u karinta, saamayntuna waa mid aad u fiican. Cudurkan deg-degga ah wuxuu ka dhigan yahay in habka is-beddelka sonkorta ama walxaha ka kooban caarada ay gubaan ugu yar inta lagu gudajiro geedi socodka karinta illaa heerka ugu dambeeya.
Yinrich waa soo-saaraha karinta ugu fiican filimka, oo bixiya qalabka jikada, mashiinka buuxinta buskud, shukulaatada shukulaatada, iyo makiinadaha khafiifka ah ee ku kariska saamaynta ugu wanaagsan ee uumiga.
Mashiinka filimka khafiifka ah (BM)
Xalka sonkorta waxaa si joogto ah loogu quudiyaa qaybta wax lagu karsado ee BM, oo ka kooban kululeeyaha ka hor, kuleylka filimka, nidaamka wax lagu kala iibsado ee faakuumka ah, mashiinka quudinta, soosaarida mashiinka iwm. Dhammaan cufnaanta waxaa lagu qaadaa iyada oo la adeegsanayo bambooyin soo dejin iyo soo dejin ah oo ay kontoroolaan qalabka wax lagu beddelo.